Ndị Bishọp atọ bụ ndị otu Chinese National People’s Congress-gloria.tv
ig.news  Maa 15
Ndị Bishọp atọ bụ ndị otu Chinese National People’s Congress
E nwere ndị bishọp atọ so na otu nnọchiteanya na 13th Chinese National People's Congress nke e mere na 11 March nke kpebiri ịkwado ọchịchị ebeebe nke onye isi obodo China, site na AsiaNews (March 13).
Nke mbụ bụ Joseph Huang Bingzhang, onye bishọp ọchịchị obodo tinyere na Shantou nke e mere nghupu na 2011. Ka ọ si na dị, Vatican gbara mbọ ugboro abụọ ịwepụ ezigbo bishọp nke Shantou, Monsignor Zhuang Jianjian, ka ha wee were Huang wee nọchite ya.
Nke abụọ bụ nke e chiri echichi na-erughi eru Bishọp Guo Jincai nke Chengde. Vatican na mgbe ahụ enweghi diọcese Chengde. Guo bu onye odeakwụkwọ nke ndi ọgbakọ bishọp nke ọchịchị obodo na-achikwa.
Nke atọ bụ Fang Jianping. E chijọrọ ya echichi, nakwa ọchọghị ịma, nke Vatican mèchàrà gbaghara. Ka a gbaghara ya ọ tinye aka na echichi episcopal atọ na-abụghi ezie. Izu ka gara aga Fang sịrị na "ọnọdụ amaala kwesịrị ịbịa tupu ọnọdụ okwukwe.”
Foto: Xi Jinping, © kremlin.ru, CC BY, #newsDzmvhemxxf
Kadịnal Brandmüller: Ebumnuche ọha na okwukwe Katọlik bụ ihe abụọ dị iche
28  Epr 8
Ndị Kadịnal ewepụtala Ngosipụta Okwukwe - zakwaa Dubia
23  Epr 8
Kadịnal Burke: “Ndị okwukwe ga-ajụ Pope oke njọ”
Ego kpatara Francis ji gọlahụ Grand Master nke Order of Malta
22  Epr 8
Francis na-agwa ndị okwukwe: Abụla ndị ọrụ okwukwe
16  Epr 8
Onye mmụta Old Testament "Katọlik" ahapụla okwukwe
28  Epr 7
Francis na ebuli mgbagwoju anya, "n'uzo pụrụ iche" – Kadịnal Burke
25  Epr 6
Kadịnal akụzierela Francis ihe - na-akpọghị ya aha
18  Epr 6
Ọnụọgụ ndị Bishọp na-atụnyere ịnata Oriri Nsọ ndị Protestant buru ibu n'uzo ọjọọ - Kadịnal Brandmül…
Kadịnal Germany na ndị Bishọp German nọ n'iro
27  Epr 6
Kadịnal "Conservative" nabatara Oriri Nsọ maka Protestants
17  Epr 6